Malaaqa Xamar iyo Xamar Daye oo soo dhoweeyay is-beddelka dalka. - Caasimada Online
Home Warar Malaaqa Xamar iyo Xamar Daye oo soo dhoweeyay is-beddelka dalka.
Malaaqa Xamar iyo Xamar Daye oo soo dhoweeyay is-beddelka dalka.
Malaaq Cali Malaaq Showri Malaaq Colow Duubka dhaqanka Xamar iyo Xamar Daye ayaa waxa uu shir jaraâ’d uu uga hadlayay xaalada siyaasadeed ee dalka marayo kuqabtay aqalka uu kadegan yahay magaalada Muqdisho.
Malaaqa ayaa ugu horeyn hambalyeeyay madaxda dowlada cusub ee Soomaliya kuwaasi oo tilmaamay iney nasiib uyeesheen iney daadihiyaan hogaanka dalka xili 20-Sano kadib ee Soomaaliya ka gudubtay Kumeel gaar una gudubta dowlada Taam ah.
“Isbadalka uu dalka galay waa mid na farxad galinayo , madaxda dowlada aan kumeelgaarka aheyna waxa leeyahay hadii aanu nahay duubka dhaqanka Xamar iyo Xamar Daye eebe ha idinku guuleeyo Rajada ee Shacabka idinka sugayaan”.
Malaaq Cali Malaaq Showri ayaa dhanka kale waxa uu fariin udiray madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamud oo malaaqu ka dalbaday inuu cadaalo falo isla markaana uu ka taxadiro talaabo walba oo xaga qaladka loo qaaday xiliga dowladi isaga ka horeesay.
“Madaxweynaha ladoortay mudane Xasan Sheekh Waxanu leenahay mudane soo dhawoow waxana aamisanahay inaa tahay hogaamiye xalaal ah isla markaana wax badan baraarugsan waxana kuleenahay hadii aanu nahay duubka dhaqanka Xamar iyo Xamar Daye inaa fiiro gaar ah uyeelato hanaanka maamul usameenta uu Gobolka yeelanayo “.
Malaaqa ayaa sidoo kale ka dalbaday madaxweynaha inuu kutixgaliyo maamul usameenta gobolka dadka ehelka u ah sida uu ugu tixgaliyay dadka deegaanka iney soo xushaan maamulada iminka kajira gobolada Bay/Bakool, Hiiraan iyo Jubbooyinka.
Malaaq Cali Malaaq Showri Malaaq Colow duubka Xamar iyo Xamar-daye ayaa sidoo kale baaq guud udiray dhamaan jaaliyadaha dibada ee kasoo jeeda deegaanada Xamar iyo Xamar Daye isagoo malaaqa ugu baaqay iney u istaagaan dibu dhiska dalka gaar ahaan deegaanada ee ku abtirsadaan.
Hadalka Malaaqa ayaa waxa uu kusoo aadaya xili madaxda cusub ee dowlada Soomaaliya ku howlan tahay maamul usameenta qaar kamid ah gobolada dalka iyadoo maamulada qaarkoodna qeylo dhaan adag kajirto hanaanka loo soo xulayo wallow madaxda dowlada dhexe ee si degan uwadaan howshaasi.